सेलेब्रिटी कुन क्लबका फ्यान ? – Etajakhabar
सेलेब्रिटी कुन क्लबका फ्यान ?
स्टेभन जेरार्डले लिभरपुलमा लोभ्याए पारस खड्का नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हेर्न प्रायः छुटाउँदैनन् । क्रिकेटका खेलाडी पारस फुटबल भने दर्शकका रूपमा ‘फलो’ गर्छन् । इंग्लिस क्लब लिभरपुर उनलाई मनपर्ने क्लब हो । ‘मैले ७–८ वर्षको हुँदादेखि लिभरपुलको समर्थन गर्दै आएको छु, लिभरपुलको फ्यान नै हुँ,’ खड्काले भने ।
सुवास नेम्वाङ पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङलाई फुटबल खेल निकै मन पर्छ । क्लब फुटबलका महत्वपूर्ण खेल हेर्न सकेसम्म छुटाउँदैनन् । मेसीको जादुले त उनलाई झन् फुटबल हेर्न बाध्य पारिदिएको छ । ‘बढी त अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नै फलो गर्छु, तर क्लबका महत्वपूर्ण खेल पनि छुटाउँदिनँ,’ नेम्वाङले सुनाए ।
उदयशमशेर राणा कांग्रेस नेता उदयशमशेर राणा वहालवाला अर्थराज्यमन्त्री पनि हुन् । राजनीतिक मैदानका खेलाडी राणा फुटबल मैदानका नियमित दर्शक हुन् । बलिया क्लबका खेल हेर्न उनी छुटाउँदैनन् । नेता राणाको दिल पनि लिभरपुलमै बसेको छ, धेरै वर्षदेखि । ‘सन् १९८० तिर म बेलायतमा पढ्दाताका मैले क्लब फुटबल फलो गर्न थालेँ । त्यसवेला लिभरपुलको राम्रो खेलमा लोभिएर फ्यान नै भएँ,’ राणाले सुनाए ।
दीपक विष्ट तेक्वान्दोका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी दीपक विष्ट पनि फुटबलको ‘क्रेजी’ दर्शक हुन् । उनी पनि क्लब लिग खुबै पछ्याउँछन् । विष्ट भने स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका फ्यान हुन् । तर, पहिले उनलाई अर्कै क्लब मनपथ्र्यो । पछि, बार्सिलोनातिर तानिएका हुन् । ‘पहिले म्यानचेस्टर युनाइटेडको फ्यान थिएँ, तर पछि बार्सिलोनातिर मन बस्यो,’ विष्टले भने, ‘लियोनल मेसीको उदयसँगै बार्सिलोनातिर सिफ्ट भएँ ।’
बार्सा र सिटीलाई पूरा समर्थन दीपकराज गिरी कलाकार दीपकराज गिरीले सन् १९८६ को विश्वकप पूरा समय दिएरै हेरे । पूरा खेल हेर्दासम्म उनलाई अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोनाको कलाले लोभ्यायो । त्यही विश्वकपपछि अर्जेन्टिनाको समर्थक बनेका गिरीको मन लामो समयसम्म अरू खेलाडीले तान्न सकेनन् । बरु, अर्जेन्टिनाकै अर्का खेलाडी मैदानमा उदाए, लियोनल मेसी । म्याराडोनाको स्थान गिरीको नजरमा मेसीले पूर्ति गरिदिए । यसैकारण उनी मेसीले बाल्यकालदेखि खेल्दै आएको क्लब बार्सिलोनालाई समर्थन गर्छन् । ‘मलाई मनपर्ने मेसीले खेल्दै आएको बार्सिलोनालाई समर्थन गर्छु । इंग्लिस प्रिमियर लिग पनि फलो गर्ने म म्यानचेस्टर सिटीलाई समर्थन गर्छु,’ गिरीले भने ।
अनिल गुरुङ फुटबलर अनिल गुरुङले फुटबल पछ्याउन थाल्दा डेभिड बेकह्याम इंग्ल्यान्डका प्रमुख खेलाडी थिए । बेक्ह्याम त्यतिवेला म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट खेल्थे । बेकह्यामका कारण म्यान यूको फ्यान बनेका गुरुङ अहिलेसम्म निरन्तर उसकै समर्थनमा छन् ।
लाइभ खेल हेरेपछि म्यानचेस्टर सिटीमा मन उपेन्द्रमान सिंह राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्लब फुटबल छुटाउने कुरै भएन । खेल सबै हेरेपनि विशेष खेलाडी, क्लब र देशलाई समर्थन भने जोकसैको हुन्छ । सिंह जर्मनीलाई समर्थन गर्छन् । ‘नेपाली फुटबललाई जर्मनीले सहयोग गरेको छ । मैले त्यहाँ गएर तालिम पनि लिएको छु । त्यसैले जर्मनको सपोर्टर हुँ,’ उनले बताए ।
मेसी आएपछि अन्त छैन मन सरोज खनाल अभिनेता सरोज खनाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्लब फुटबललाई खुब पछ्याउँछन् । खनाललाई पनि मेसी नै मन पर्छन् । मेसीको उदयसँगै अरू खेलाडीले मन जित्न नसकेको उनी स्विकार्छन् । ‘मेसी धरै शान्त छन्, खेल उस्तै राम्रो खेल्छन् । उनको फ्यान भएपछि बार्सिलोना नै मन पराउनु स्वभाविक नै भयो,’ उनले भने ।
खेलाडी मन परेपछि बार्सिलोनाको फ्यान उमेश मैनाली लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि महत्वपूर्ण फुटबल खेल हेर्न छुटाउँदैनन् । समय मिलाएर रियल म्याड्रिड, बार्सिलोनालगायत क्लबका खेल हेर्छन्, उनी । ‘मलाई बार्सिलोनाका खेलाडी बढी मन पर्छन् । त्यसैले, बार्सिलोनाकै समर्थन गर्छु,’ उनले मेसीको प्रशंसा गर्दै अगाडि भने, ‘लियोनल मेसीको पास दिने र ड्रिब्लिङ गर्ने कला राम्रो लाग्छ । खेलाडी मन परेकै कारण बार्सिलोनाको फ्यान भइयो ।’
रोनाल्डोको जादुले रियलको समर्थक बद्री पंगेनी गायक बद्री पंगेनी भने एउटा क्लबको मात्रै आफूलाई फ्यान ठान्दैनन् । उनलाई मनपर्ने दुईवटा क्लब छन् । ‘स्पेनिस क्लबमा रियल म्याड्रिड मन पर्छ र इंग्लिस क्लबमा आर्सनल,’ उनले भने, ‘आर्सनलमा सदाबहादर प्रशिक्षक आर्से बेंगर छन् भने रियल म्याड्रिडमा रोनाल्डोले जादु देखाउँछन्।’ पंगेनीलाई बेंगरको खेलाउने शैली राम्रो लाग्छ भने रोनाल्डोको खेल्ने तरिका । ‘ड्रिब्लिङ, बल कन्ट्रोल, पावरसुट, सबै उत्कृष्ट लाग्छ,’ उनले रोनाल्डोको बयान गरे । त्यसो त पहिले स्पेनका फर्नान्डो टोरेस पंगेनीलाई मनपर्ने फुटबलर थिए । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १६, २०७४ समय: १०:१९:४९
विदेशी टोली नेपालमा एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न इच्छुक: ” श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बांग्लादेश जस्ता टेस्ट राष्ट्रहरूलाई पनि चाँडै नै नेपालमा खेलाउन सकिन्छ,” पारस खड्का